Instagram မှာ Facebook လိုမျိုး Post တွေပြန် Share နိုင်အောင် စမ်းသပ်နေပြီ
21 Sep 2018 . 4:25 PM
Instagram ဆိုတာကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Social Media တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Feature အသစ်တစ်ခုကို စမ်းသပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု Instagram က စမ်းသပ်နေတဲ့ Feature ကတော့ ယခင်ကလည်း စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Regram လိုမျိုး Feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ဟာ ယခင်တုန်းက Instagram Post တွေကို ပြန် Share လို့ရတဲ့ Regram Feature ကို ထည့်သွင်းဖို့ စီစဉ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ မပြုလုပ်ဖြစ်ဘဲ Share To Stories Feature ကိုပဲ ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာလည်း “Seamless Sharing” ဆိုပြီးတော့ Stories အစား Feed မှာ ပြန်လည် Share နိုင်တဲ့ Feature ကို စမ်းသပ်နေတာပါ။
အခုလိုမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ Feed ကို ပြန်လည် Share မယ်ဆိုရင် ယခု Stories ကို ပြန်လည် Share သလိုမျိုးပဲ မူရင်းတင်ထားတဲ့သူရဲ့ Account ကိုပါ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Stories ကို Share သလိုမျိုးပဲ Instagram Post တွေရဲ့ ညာဘက်က Menu ကနေ Share နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Instagram Post တွေကို Re-share ပြုလုပ်နိုင်တာက ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပေမယ့် Instagram ကတော့ လောလောဆယ်မှာ Fake News တွေ ပြန့်ပွားမှာနဲ့ Instagram Direct လိုမျိုး Direct Messaging Service ကို အသုံးပြုမှုနည်းပါးသွားမှာကို စိုးရိမ်နေပုံရပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ Instagram က အခုလို Re-share ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း Business Profile တွေကို Limit လုပ်ထားနိုင်အောင်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Instagram မှာ Post တွေကို Re-share ပြုလုပ်နိုင်မလား၊ မပြုလုပ်နိုင်ဘူးလားကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
Instagram ဆိုတာကတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ အောငျမွငျနပွေီဖွဈတဲ့ Social Media တဈခုဖွဈပွီးတော့ အခုနောကျဆုံးအနနေဲ့ Feature အသဈတဈခုကို စမျးသပျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ အခု Instagram က စမျးသပျနတေဲ့ Feature ကတော့ ယခငျကလညျး စမျးသပျခဲ့ဖူးတဲ့ Regram လိုမြိုး Feature ပဲဖွဈပါတယျ။
Instagram ဟာ ယခငျတုနျးက Instagram Post တှကေို ပွနျ Share လို့ရတဲ့ Regram Feature ကို ထညျ့သှငျးဖို့ စီစဉျခဲ့ဖူးပမေယျ့ တကယျတမျးမှာတော့ မပွုလုပျဖွဈဘဲ Share To Stories Feature ကိုပဲ ထညျ့သှငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာလညျး “Seamless Sharing” ဆိုပွီးတော့ Stories အစား Feed မှာ ပွနျလညျ Share နိုငျတဲ့ Feature ကို စမျးသပျနတောပါ။
အခုလိုမြိုး ကိုယျ့ရဲ့ Feed ကို ပွနျလညျ Share မယျဆိုရငျ ယခု Stories ကို ပွနျလညျ Share သလိုမြိုးပဲ မူရငျးတငျထားတဲ့သူရဲ့ Account ကိုပါ ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပွီးတော့ Stories ကို Share သလိုမြိုးပဲ Instagram Post တှရေဲ့ ညာဘကျက Menu ကနေ Share နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး Instagram Post တှကေို Re-share ပွုလုပျနိုငျတာက ကောငျးတဲ့အခကျြဖွဈပမေယျ့ Instagram ကတော့ လောလောဆယျမှာ Fake News တှေ ပွနျ့ပှားမှာနဲ့ Instagram Direct လိုမြိုး Direct Messaging Service ကို အသုံးပွုမှုနညျးပါးသှားမှာကို စိုးရိမျနပေုံရပါတယျ။ နောကျထပျသိရတဲ့သတငျးတဈခုကတော့ Instagram က အခုလို Re-share ပွုလုပျနိုငျမယျဆိုရငျလညျး Business Profile တှကေို Limit လုပျထားနိုငျအောငျပွုလုပျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ Instagram မှာ Post တှကေို Re-share ပွုလုပျနိုငျမလား၊ မပွုလုပျနိုငျဘူးလားကတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ။
by 2B . 51 mins ago
E3 2019 မှာ မိုဘိုင်းအတွက် ကြေညာသွားတဲ့ Arcade ၊ Shooter နဲ့ Strategy ဂိမ်းအလန်းများ
Android ဂိမ်းတွေကို PC မှာ 240 fps နဲ့ ဆော့နိုင်မယ့် MSI App Player
by Nigma . 1 day ago
E3 2019 မှာ ဂိမ်မာတွေ မျှော်လင့်ထားတာနဲ့ Developer တွေ လုပ်ချသွားတဲ့ ဂိမ်းအလွဲများ
နောက်ဆုံးရ နည်းပညာသတင်းများ စုစည်းမှု (ဇွန်လ၊ ၁၅ ရက်)